सिलिकन मैंगनीज एलोय (साइमन) सिलिकॉन, मैंगनीज, फलाम, सानो कार्बन र केही अन्य तत्वहरू मिलेर बनेको हुन्छ। यो सिलभन धातुगत सतहको साथ चिल्लो पदार्थ हो। इस्पातमा सिलिकोमेन्गनीजको थप प्रभावको प्रभाव: सिलिकान र मैंगनीज दुबै स्टिलको गुणहरूमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्दछ।
फेरोसिलिकन एक प्रकारको फेरोलोइ हो जुन फलामको उपस्थितिमा कोकको साथ सिलिका वा बालुवा घटाएर उत्पादित हुन्छ। विशिष्ट फलामका स्रोतहरू स्क्र्याप फलाम वा मिलस्केल हुन्। करीव १ 15% सम्म सिलिकन सामग्री सहितको फेरोजिलिकन्स ब्लास्ट फर्नेसहरूमा एसिड आगो ईंटहरूसहित लाइनमा बनाइन्छ।
फेरोमाng्गानिज एक प्रकारको फेरोलोइ हो जुन फलाम र मैंगनीजबाट बनेको हुन्छ। अक्साइड एमएनओ २ र फे २ ओ of को मिश्रणलाई कार्बन सहित सामान्यतया कोइला र कोकको रूपमा बनाइएको हुन्छ या त विस्फोट भट्टी वा विद्युतीय चाप भट्टी प्रकार प्रणालीमा, डूबिएको चाप भट्टी भनिन्छ।
फेरोक्रोम (FeCr) 50०% र %०% क्रोमियम बीच क्रोमियम र फलामको एक मिश्र धातु हो। विश्वको O०% फेरोक्रोम स्टेनलेस स्टीलको उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ। कार्बन सामग्रीका अनुसार यसलाई विभाजन गर्न सकिन्छ: उच्च कार्बन फेरोक्रोम / एचसीएफसीआर (सी:%% -8%), मध्यम कार्बन फेरोक्रोम / एमसीएफसीआर (सी: १% -4%), न्यून कार्बन फेरोक्रोम / एलसीएफसीआर (सी: ०.२5) % -0.5%), माइक्रो कार्बन फेरोक्रोम / MCFeCr: (C: ००3-०.१5%)। विश्वको फेरोक्रोम उत्पादनको अनुपात बढाउनको लागि चीन।
फेरोमोलिब्डेनम मोलिब्डेनम र फलामले बनेको फेरोआलोय हो, सामान्यत: मोलिब्डेनम ~० ~ %०% हुन्छ, जो स्टिलमैकिंगमा मिश्र धातुको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसको मुख्य प्रयोग स्टिलमैकिंगमा मोलिब्डेनम तत्व योजकको रूपमा रहेको छ। स्टिलमा मोलिब्डेनम थपिएको खण्डमा इस्पातलाई समान बनाउन सकिन्छ। ठीक क्रिस्टल
स्टेनलेस स्टील कट वायर शट
स्टेनलेस स्टील काटेको तार शट हाम्रो विशेष विशेषता हो। यो SUS200, 300, 400 श्रृंखलाबाट बनेको स्टेनलेस स्टील वायरबाट बनेको हुन्छ। स्टेनलेस स्टील काटिएको तार शट महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको बढ्दो संख्यामा प्रयोग भइरहेको छ जहाँ स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम ब्लास्टिंगमा लौह संदूषण
फोर्ज्ड स्टेनलेस स्टील शट SUS200, 300, 400 श्रृंखला स्टेनलेस स्टील वायर र ग्राउन्डबाट बनेको छ जुन विभिन्न गोलोपनको बलमा छ। स्टेनलेस स्टील शटको राम्रो गर्मी प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध, चमकदार सतह छ। यसले स्टेनलेस स्टील वर्कपीसमा सही प्रभाव लिन सक्छ।
कास्ट स्टेनलेस स्टील शट
स्टेनलेस स्टील शट मिडिया प्रकार हो जुन अधिक लोकप्रिय भएको छ। यस उत्पादनहरूले स्टिल शटको समान प्रदर्शन गर्दछ, तथापि, स्टेनलेस स्टीलको बनेको हुन्छ। यसले निकेल र क्रोमियमको उच्च एकाग्रता समावेश गर्दछ। र राम्रो medias विचार गर्न को लागी जब काम टुक्रा को लौह संदूषण हुन सक्दैन
उच्च कार्बन गोल स्टील शट
विशेष स्टीलको बनेको, उच्च कच्चा इस्पात शट, कडा र टेम्पर्ड, ०. %85% भन्दा बढी कार्बनमा सामग्री छ। थ्रो एटोमाइजेसन प्रक्रिया, पिघलाएको इस्पातले बनेको गोलाकार कणहरू। फेन्गरदाले उत्पादनको सबै लि strictly्कलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्दछ, विशेष गरी डिऑक्सिडेशनको नियन्त्रण र decarboniza
कम कार्बन गोलाकार स्टील शट
कम कार्बन स्टील शटमा कम कार्बन, फास्फोरस र सल्फर उच्च कार्बन स्टील शटहरू भन्दा कम हुन्छन्। तसर्थ, कम कार्बन शटको आन्तरिक माइक्रो संरचना धेरै सहज छ। कम कार्बन स्टील शटहरू उच्च कार्बन स्टिल शटको तुलनामा नरम हुन्छन्।
एल्युमिनियम शट / काटिएको तार शट
एल्युमिनियम कट-वायर शट (एल्युमिनियम शट) मिश्रित एल्युमिनियम ग्रेड (43०4343, 5०53) मा उपलब्ध छ साथ साथै मिश्र gradeses जस्तो कि टाइप 5355. मा। Hard० देखि range० दायरामा बी कठोरता।
रातो तामा शट / तामा काटिएको तार शट
१.२० ″ सम्म फ्ल्यास हटाउँदछ सतहलाई हानी नगरी मर्ने कास्टि″बाट
कम लगाउँदछ र ब्लास्ट उपकरणमा फाड़
रंगको र अन्य कोटिंग्स भागको सतहमा कुनै क्षति नगरी हटाउँदछ
जिंकको पातलो फिल्म चक्रको अवधिमा स्टिलको भागहरूमा जम्मा गरिन्छ छोटो अवधिको जंग संरक्षण प्रदान गर्दछ
जिंक शट / जिंक जस्ता तार शट
हामी जिंक क्वायर शटको गुणात्मक दायरा प्रस्ताव गर्दछौं। सक्षम दरहरूमा उपलब्ध, हाम्रा उत्पादनहरूले ब्लास्ट उपकरणमा लगाउने लुगा र च्याते। यी जिंक काटिएको तार शटहरू स्टेनलेस स्टील काटिएको तार वा कास्ट उत्पादनहरू भन्दा नरम हुन्छन्। जस्ता काटिएको तार शट विभिन्न आकारमा उपलब्ध छ।
एलोय ग्राइन्डिंग स्टिल शट उच्च कार्बन स्टील शट, कम कार्बन स्टील शट, र कम भ्यानियम स्टील शटमा आधारित छ, माथिका उत्पादनहरूको घातक कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दै: एयर प्वाल, दरार, कठोरता भिन्नता, नयाँ उत्पादनहरू पुनःसर्च गरेर विकास गर्नुहोस्। फोर्जिंग टेक्नोलोजी, यसले बिभिन्न सामग्री छनौट गर्न सक्दछ
फोर्जिंग स्टिल रोलिंग बल कच्चा मालको रूपमा राउन्ड स्टीलको बनेको हुन्छ, जुन नयाँ रोलि and र फोर्जिंग टेक्नोलोजीद्वारा शारीरिक रूपमा प्रशोधन गरिन्छ र त्यसपछि विशेष गर्मी उपचार टेक्नोलोजीद्वारा निर्मित हुन्छ।
वर्षौंको अनुभव संचय र दोहोरिएका परीक्षणहरूको पछि,
वायर शट / नयाँ तार काट्नुहोस्
कट वायर शट उच्च गुणको तारबाट निर्मित हुन्छ जुन यसको व्यास बराबरको लम्बाइमा काटिन्छ। कट वायर शट उत्पादन गर्न प्रयोग गरिएको तार कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, जिंक, निकल मिश्र, कपर वा अन्य धातु मिश्रित धातुबाट बनाउन सकिन्छ। यो अझै काट्ने देखि धार कुनाहरु छ
वायर शट / प्रयुक्त तार काट्नुहोस्
पुनर्नवीनीकरण स्टील काटिएको तार शट एक प्रकारको उत्पादन हो जुन रिसाइक्ड सामग्री प्रयोग गर्दछ, यसको सामग्री लागत कम छ, र उच्च सटीक उत्पादनहरू उत्पादन गर्न गाह्रो हुन्छ, यस प्रकारको उत्पादन केवल कास्ट सतह सफा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो मुख्यतया सार्वजनिक रूपमा uesd हो इलाका। ग्राहकहरू जोसँग विशेष छैन
उच्च कार्बन कोणीय स्टील ग्रिट
उच्च कार्बन कोणीय स्टील ग्रिट उच्च कार्बन स्टील शटबाट निर्मित छ। स्टिल शटहरू जुन ग्रेनुलर ग्रिट फार्ममा कुचिन्छ र त्यसपछि तीन फरक कठिनाइहरू (GH, GL र GP) लाई टेम्पर्ड हुन्छन् विभिन्न अनुप्रयोगहरूको लागि। उच्च कार्बन इस्पात ग्रिट डेसिलीका लागि मिडियाको रूपमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ
कम कार्बन कोणीय स्टील ग्रिट
कम कार्बन कोणीय स्टील ग्रिट कम कार्बन स्टीलबाट निर्मित हुन्छ
शट। स्टील शटहरू जुन दानाको ग्रिटमा कुचिएका छन्। तातो उपचारको कारण गल्तीबाट मुक्त हुनु पर्ने थप उपचार आवश्यक छैन।
असर ए Ang्गलर स्टील ग्रिट भाँचिएको बेयरिंग प्लेट्सबाट बनेको हुन्छ। असर स्टिलको सीआर, मो दुर्लभ तत्व हुन्छ, यसको संरचना भित्र राम्रो स्थिरता हुन्छ। असर एB्गलर स्टील ग्रिट उच्च स्थिर प्रदर्शन, उच्च पोशाक प्रतिरोध, यसको काम जीवन २. times गुणा लामो छ उच्च कार्बन स्टील ग्रिट र कम कार्बिन